KICK BOXING – FIFANINANAM-PIRENENA :: Nahoron’ireo mpikatroka avy eto Analamanga ny amboara • AoRaha
KICK BOXING – FIFANINANAM-PIRENENA Nahoron’ireo mpikatroka avy eto Analamanga ny amboara
Anaram-boninahitra roa ambin’ny folo tamin’ireo roapolo niadiana nandritra ny fifaninanam-pirenena ho an’ny taranja kickboxing, notanterahina teny amin’ny lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina, tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo, no azon’ireo mpikatroka avy eto Analamanga.
Ny efatra tamin’ireo no azon’ity ligy ity tamin’ny Low kick sokajy vehivavy, raha efatra tamin’ireo valo niady kosa no azony teo amin’ny sokajy lehilahy. Anaram-boninahitra tompondakan’
i Madagasikara efatra ihany koa tamin’ireo valo niadiana no azon’ireo mpikatroka avy eto an-drenivohitra, teo amin’ny K1. Nitana ny laharana faharoa kosa ny Ligim-paritra Atsimo Andrefana, izay nahazo medaly volamena efatra. Teo amin’ny laharana fahatelo kosa ny ligin’i Vakinankaratra, nahazo anaram-boninahitra telo, raha i Atsinanana nahazo iray no teo amin’ny laharana fahefatra.
Nomen’ny Federasiona malagasin’ny taranja haiady kickboxing tamby iray tapitrisa ariary avokoa ireo mpikatroka voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara tamin’ity fifaninanam-pirenena ity. « Natao indrindra hifantenana ireo handrafitra ny ekipam-pirenena hiatrika an’ireo fifaninanana iraisam-pirenena amin’ny taona 2019 iny hetsika iny », hoy i Mamindraibe Andrianome, filohan’ny Federasiona malagasin’ny taranja haiady kickboxing.
Fifaninanana anatiny Hifanandrina amina taranjam-panatanjahantena dimy ny samy zandary
Handball- « IHF Trophy » Mangataka fanampiana ny Federasiona
Basketball – Lalaon’ny nosy 2019 Hanatevina ny ekipam-pirenena Malagasy i Rija sy Ange
Fanatanjahantena • Pejy manokana
Baolina kitra – CAN 2019 Mizara ny hevitry ny mpanaraka baolina kitra malagasy momba ny herijikan’ny Barea
BAOLINA KITRA :: Ho fantatra amin’ny janoary ny datim-pifidianana FMF
KITRA – «UEFA CHAMPIONS LEAGUE» :: Nahazo tany malemy ny Real Madrid, sendra ny henjana ny Liverpool
Fanafihana sy fandrobana Ireo tokantranon’olona sembana sy malemy indray no lasibatry ny jiolahy
Fitsaram-bahoaka Roa lahy novonoina teo anoloan’ ny biraon’ny kaominina
Fahasemporana Ankizy efatra lasibatry ny kilalao mampidi-doza